Uluhlu lweeMveliso zoKhuseleko lwaBantwana - Ukhuseleko Bucala Nokukhuselwa
Uluhlu lweeMveliso zoKhuseleko lwaBantwana
Ngamanye amaxesha, kubonakala ngathi abantwana bazimisele ukufumana indlela yokuzenzakalisa. Ngethamsanqa, uya kufumana ubutyebi bezixhobo zokhuseleko lwabantwana eziyilelwe ukugcina abantwana bekhuselekile, nokuba zisetyenziswa xa uqhuba emotweni okanye ukunqanda iingozi ekhaya. Ukusebenzisa izixhobo ezikhuselekileyo ngokufanelekileyo kubalulekile ekuqinisekiseni ukuba umntwana wakho akalimazi.
Iindawo zoMbane eziNgqina zaBantwana
Iindawo zombane zinokubonelela ngomothuko oyingozi kumntwana wakho omncinci ukuba umnwe okanye enye into ifakwe kwislot yombane. Sebenzisa amaqweqwe outlet kunokuthintela oku; Ngokwesiqhelo kulula ukuba zisebenzise umntu omdala ukuba kufuneka indawo ekuphuma kuyo. Kukho iintlobo ezininzi zezinto zokubonisa ubungqina bomntwana ezinokusetyenziswa kwiivenkile.
Imifanekiso ehlekisayo yoKhuseleko eMsebenzini
Imifanekiso yoKhuseleko lobuDenge
Imifanekiso yoKhuseleko ehlekisayo
Outlet Imigudu kunye ukuvaleka
La ngamaqweqwe ezinto ezikhutshiweyo abantu abaninzi abaziyo. Ufakela ezi ziqwenga zimbini zeplastiki zivelweyo kwindawo ethile. Ezi zinokubizwa ngokuba iminqwazi .
Kukwakho uqweqwe ezinokulingana ngaphezulu kwayo nayiphi na iplagi esetyenziswayo ekuphumeni ngelixa ugcina iminwe emincinci ngaphandle.
Ezi zixhobo zinokufakwa kuyo yonke ipleyiti yodonga kwaye zijongeka njengeplate yokuthengisa eqhelekileyo. Nangona kunjalo, ezi zinendlela ethile ebhloka iminwe encinci kodwa ikuvumela ukuba ufake iplagi yombane njengoko kufuneka. Ezinye iinguqulelo ziza ngokwahlukeneyo imibala ukutshatisa ukuhombisa kwakho. Abanye banezikhuselo ezijingayo nganye nganye iplagi umngxunya kwaye ikuvumela ukuba usebenzise icandelo elinye ngexesha ngelixa elinye iphuma lihlala livaliwe.
Imicu yamandla ineendawo zombane ezininzi ezinokuba yingozi. Iziqweqwe zombane zigcina iiplagi kubantwana abanomdla kodwa zisakuvumela ukuba usebenzise ezivenkileni; ezi uqweqwe inokuhlengahlengiswa ukukuvumela ukuba ufake iiplagi ezinkulu ezinjengetshaja okanye iiplagi zekhompyuter.
Ukulindwa kwefanitshala yaBantwana
Ifanitshala yendlu yakho inokuba yingozi kumntwana okhasayo. Imiphetho ebukhali okanye ukunxiba abanxibayo banokwenzakalisa kakhulu usana, ke kuya kufuneka ufake izinto zokhuselo ukunciphisa umngcipheko. Kukho inani lezinto ezinokuqinisekisa ubungqina befenitshala kunye nezinto ze-elektroniki.
Umda kunye noonogada basembombo
Ukukhusela intloko okanye amehlo omntwana wakho kwiikona ezibukhali okanye emaphethelweni, ungafaka oonogada abangaphandle kwiitafile zekofu ezisezantsi okanye nangaphezulu umqamelo ezishelfini. Iyandiswa abakhuseli betafile Ukujikeleza imiphetho yetafile ikwafumaneka ngemibala eliqela.
Abalindi beengcebiso okanye ii-ankile
Abantwana abanomdla banokubamba ngaphezulu koomabonwakude, abanxibayo, iishelufa zeencwadi, okanye ezinye izinto zefanitshala. Ukufaka iiankile ezenza kube nzima ukutsala ezi zinto kunokukhusela umntwana wakho kunye notyalo-mali lwefanitshala. Ezi zinokuba njalo imitya okanye izibiyeli ; Zombini zinokusetyenziselwa ukuthintela ukuncipha. Ubunzima befanitshala bunokuchaphazela uhlobo- okanye inani leebakaki okanye imitya oyisebenzisayo ukuthintela ukuwa. Izitshixo Ukukhusela iiTV zeTV ezikrwada ekufumanekeni nazo ziyafumaneka.
Abakhuseli beDVD / VCR
Iminwe okanye ezinye izinto ezinjengeethoyi okanye iisendwitshi zinokubekwa kwiiVCR okanye kwiDVD player. Ukugcina umntwana wakho ekubekeni izinto kusapho lweCRR, unokuthenga ngokucacileyo isiciko ekuvumela ukuba usebenzise ulawulo lwakho olukude ngesiqhelo.
Amasango aBungqina boMntwana
Kukhwela okanye ukuhamba, izitepsi zinokubonakala ngathi ngumda olandelayo kodwa ngelishwa, izinyuko zinokuba ngunobangela wokulimala kakhulu okanye ukufa. Ukuthintela uhambo olungacwangciswanga ezinyukweni, kuya kufuneka ufake amasango phezulu nasezantsi kwizinyuko. Kukho iindidi ezimbini zamasango - uxinzelelo oluphakanyisiweyo kunye namasango anyusiweyo.
Amasango anokusetyenziselwa ukuvimba ukungena kwamanye amagumbi okanye ukunciphisa indawo umntwana angadlala kuyo. Njengokuba eminye iminyango mikhulu, ungathenga izandiso ukwenza isango lide.
Amasango anyuswe ngoxinzelelo
Olu hlobo lwe Isango ayiqhotyoshelwanga ezindongeni. Oku kuthetha ukuba ayinasandi ngokwaneleyo ukuba ungasisebenzisa ngaphezulu kwaso nasiphi na isinyuko, kodwa inokunceda kwiminyango nakwiipaseji.
ungaphuma xa uneminyaka eli-16
IiGates ezixhonywe kwiHardware
Ezi ziboshwe kwifreyimu yendlu yakho okanye kwizinyuko. Ezi zomelele ngokwaneleyo ukuya phezulu kwizinyuko.
Iindawo zokulala ukuthintela ukuwa
Xa umntwana wakho eyeka ukulala kwisibhedlele, uya kufuna ukugcina umntwana wakho angabikho embhedeni okanye aphume xa ungafuni. Nokuba ungasebenzisa luphi uhlobo lwebhedi, ungafaka iileyili zebhedi ukukhusela unyana okanye intombi yakho. Udonga aluyongena endaweni elungileyo kuba umntwana unokubambeka phakathi kodonga kunye noomatrasi okanye ibhokisi yasentwasahlobo; kungcono uloliwe kumacala omabini ebhedi.
Oololiwe beebhedi zosana
Abanye iileyili zenzelwe iibhedi zabantwana abancinci. Unokukhetha enye yokudibanisa ukugqitywa kwebhedi, kubandakanya iinkuni.
Ezinye iileyili zebhedi
Ezinye iileyili ziyahlengahlengiswa kwaye zinokulingana amawele, agcwele, okanye iibhedi zobukhulu bendlovukazi.
Kukho uloliwe obalekayo onokusetyenziselwa iibhedi ezingamawele kubantwana ukuya kwiinyanga ezingama-24. Oku kuza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni.
Ukuwa kweefestile kuqhelekile ngakumbi xa kushushu, kwaye iintambo ezivela kwiimfama zinokubonisa ingozi yokuqhawuka. Unokungqina ubungqina beewindows zakho ngeemveliso ezithile eziluncedo.
Umlindi wefestile ngumqobo ohamba ngapha kokuvula onokugcina umntwana wakho angangeni. Nangona kunjalo, kwiifestile ezikumgangatho we-6 okanye ezantsi, i iwindow kufuneka ikwazi ukuvulwa ngokulula ngabantu abadala kunye nabantwana abadala xa kunokwenzeka umlilo. Aba nogada beza ngobukhulu obahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo zeefestile, kwaye imivalo kufuneka ibe zii-intshi ezi-4 ngokwahlukeneyo.
Abanye oonogada Ingasetyenziselwa zombini nkqo kwaye tye windows. Kukwakho neenkonzo ezinokukunceda ubone ukuba loluphi uhlobo lweefestile onazo ekhayeni lakho ukuze ukwazi ukuthenga oonogada abalinganayo. Ukuba awufuni ukusebenzisa umzila wefestile, ungagcina umntwana ukuba angawi ngaphandle kwefestile usebenzisa iiwindow. Ezi iyamisa gcina iifestile zingavuleki ngokwaneleyo ukuze umntwana angene.
Iimfama nazo zinokuba sisilingo ebantwaneni kwaye zinokukhokelela ekuzinciphiseni ngemizila. Iinkampani ezininzi zithengisa izixhobo ezithi zifinyeze iintambo okanye ezigcina ifayile ye- ngeentambo ngaphandle komntwana wakho. Unoku-odola iimfama ezikhethekileyo ezingenantambo ukuze kungabikho imitya yabantwana abancinci yokutsala.
Ukukhusela iminwe emincinci ekucingeni ngokucofa iingcango okanye kwiingcango ezivaliweyo sesinye isizathu sokufaka izixhobo zokhuseleko. Kukho iindlela ezimbalwa onokwenza ngazo, kuxhomekeke kuhlobo lweengcango onazo.
indlela yokwenza iphepha shurican
Tshixa ucango oluvaliwe kabini Ingasetyenziselwa kwikhabethe kunye neengcango ze-pantry ukugcina abantwana ngaphandle; ezinye iintlobo ze Izitshixo zeminyango Ingasetyenziselwa kwiminyango eqhelekileyo ukugcina abantwana ngaphakathi kunye nokugcina umnyango ungabethi kwiminwe yomntu.
Enye indlela yokuthintela umntwana ekuvuleni umnyango ongavumelekanga Izigqubuthelo zomnyango . Abantu abadala banokuzisebenzisa ngaphandle kwengxaki, kodwa kunzima ngakumbi ekubambeni umntwana.
Ukuba iingcango zakho zinesiphatho sesimbo sokuxhathisa, ungabakhusela abantwana usebenzisa i Isitayile sokutshixa .
Ukutshaya iiAlarm kunye neCarbon Monoxide Detector
Enye into ebalulekileyo ekukhuseleni ikhaya lakho ukufaka ukutshaya ialam kwaye iicarbon monoxide detectors . Kuya kufuneka uzifakele yonke indlu-kubandakanya ngaphakathi okanye kwiminyango yamagumbi abantwana bakho. Kubalulekile ukuba uzitshekishe inyanga nenyanga ukuqinisekisa ukuba zisebenza kakuhle.
Izixhobo zoKhuseleko kwigumbi lokuhlambela
Igumbi lokuhlambela linengozi ezininzi kubantwana abancinci. Ukurhaxwa, ukukhukhumala, amaqhuma, kunye netyhefu yonke ingozi kweli gumbi, kodwa iimveliso zokhuseleko zinokunceda.
Abantwana bayatsaleleka emanzini, kwaye kulula kubantwana abasakhasayo ukuvula isiciko sendlu yangasese. Ukuthintela ukuba umntwana angatshoni kwindlu yangasese, kuya kufuneka ufake ifayile ye- iqhaga langasese .
Ukukhusela umntwana kwimivumbo okanye amanxeba, kukho uqweqwe lwetephu . Oku kuza ngeendlela ezininzi zokuzonwabisa ezinjengeemvubu okanye iindlovu.
Ukulinganisa amanzi ashushu ashushu yenye ingozi. Ngelixa kufuneka uhlengahlengise ubushushu bamanzi ekhayeni lakho ukuya kwi-120 degrees F ukunciphisa umngcipheko wokutsha, unokuthenga kwakhona Izixhobo zokulwa ne-scald ukukuxwayisa ukuba amanzi ashushu kakhulu.
ulisusa njani iphunga le-skunks
IKhabinethi kunye neeLocker Locks
Kuxhomekeka kwiindidi ze iikhabhathi okanye iidrowa onayo kwigumbi lokuhlambela, unokufumana ii-latches zokugcina iintsana ezinomdla kunye neentsana ngaphandle kwezinto zokucoca ezinobungozi okanye iikhabhathi zamayeza.
Unokukhetha kwakhona isifuba samayeza esikhethekileyo ukugcina amayeza akho ukuze abantwana bakho bangangeni kuwo.
Izinto zokhuselo ekhitshini
Phakathi kwezinto ezibuthathaka zeglasi, isitovu esishushu, iimveliso zokucoca kunye nezixhobo ezibukhali, ikhitshi linokuba ligumbi eliyingozi ebantwaneni. Ngethamsanqa, kukho inani leemveliso ukwenza izinto zikhuseleke.
Izixhobo zasekhitshini zinokuba yingozi kwiintsana nakwiintsana, kodwa iimveliso ezininzi zenzelwe ukunceda. Izimbozo zesitovu inokugcina umntwana angavuli i-oveni okanye isitovu ngaphezulu. Enye into yokukhusela abantwana bakho yi Isitovu sisiqwenga seplastikhi esithintela umntwana ekuthinteni amehlo esitovu ashushu.
Ukongeza, latches ingafakwa eminyango ukugcina abantwana ekuhlaseleni ifriji. Abantu abadala banokuzikhulula ngokulula ukuze bakwazi ukufikelela ekutyeni.
Idrowa kunye neKhabinethi yokutshixa
Izitshixo eziguqukayo Unokwala ukufikelela nasiphi na isixhobo ekhitshini. Ikhitshini yeKhabhinethi ingagcina abantwana ngaphandle kwepryry okanye iikhabhathi.
Iimveliso zoKhuseleko echibini
Ngelixa amachibi ezonwabisa kwaye emnandi, ayingozi enkulu ebantwaneni. Ukuba unendawo yokuqubha endlwini yakho, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye zeemveliso zokhuseleko.
Zonke iibhafu ezishushu kunye namachibi kufuneka angqongwe ngocingo lweephuli. Uninzi iingcingo echibini kufuneka ifakwe ngokufanelekileyo; Nangona kunjalo, kukho ezinye eziza nemiyalelo kunye nezixhobo zokuvumela ufakelo lwasekhaya njengokuba. Ezinye iingcingo ziye zize ngeendidi ze imibala ukutshatisa ukuhonjiswa kweyadi yakho.
Nangona iingcingo zamachibi zibalulekile kulo naliphi na iphuli, i IKhomishini yoKhuseleko lweMveliso yabaThengi icebisa ukuba ukongeze i- i-alamu yedama kunye ne-alamu emnyango echibini ukwazisa abantu ukuba umntwana, isilwanyana sasekhaya, okanye umntu ongenileyo ungene ngaphandle.
Ukugcina iphuli igqunyiwe kuyenza ingakulingeli kangako abantwana. An inshorensi echibini oluzenzekelayo Unokuba yinxalenye yesicwangciso sokukhusela iphuli.
Ezinye izixhobo zoKhuseleko lwaBantwana
Phrinta uluhlu lwakho lokuthenga!
Kukho ezinye izinto onokuzithenga ukunyanzelisa ukhuseleko lwabantwana. Qiniseka ukuba utyala imali kwezi mveliso zibalulekileyo.
Enye yezinto zokuqala zokhuselo bonke oomama nootata abaya kuyisebenzisa sisihlalo semoto ukuhambisa usana lwabo olutsha ekhaya.Izihlalo zeemotoayizizo izinto zobunewunewu; ziyimfuneko ngokomthetho. Izifundo zibonise ukuba bambalwa abantwana abonzakeleyo okanye ababuleweyo kwiingozi zeemoto xa izihlalo zemoto zisetyenziswe ngokuchanekileyo. Qiniseka kwaye ujonge kwilizwe lakho ukuze ubone ukuba yeyiphi iminyaka yobudala kunye nobunzima ekusetyenzisweni kwesihlalo semoto. Ngokwesiqhelo, xa umntwana efikelele kubudala obuthile, isihlalo sokunyusa samkelekile ekugibeleni imoto.
Oku kukuvumela ukuba umamele usana lwakho okanye umntwana wakho xa ukwenye indawo yendlu.Iimonithaineempawu ezininzi ezahlukeneyo kubandakanya ividiyo kunye neeyunithi zezandla eziphathekayo ukuze umamele ekuhambeni.
Ngelixa izixhobo ezininzi zokhuseleko lwabantwana zikhona ukunceda abazali, akukho nanye kwezi ethatha indawo yokujonga ngokufanelekileyo. Ukwazi ukuba umntwana wakho unomdla ngokwemvelo kwaye uya kufuna ukuphonononga kuya kunceda ukugcina umgangatho wakho wokukhathazeka xa esenza into ephazamisayo. Gcina umntwana wakho engenzakalisi ngokuthatha amanyathelo okugcina izinto ezinobungozi kunye nezinto zingabikho endleleni yakhe.
Ukuba ufuna uncedo lokukhuphela uluhlu oluprintiweyo lokuthenga, jonga eziiingcebiso eziluncedo.
Malunga Izihlangu Imisebenzi Yabantwana Ukunyamekelwa Kwabantwana Abantwana Imiboniso Yeslides French Imiboniso Yesilayidi
Ukuzivocavoca Izixhobo Kunye Neapparel
Iimveliso Zefeng Shui
Iiwigs Ne Ihairpieces
indlela yokufumana i-nail polish ezindongeni ngaphandle kokususa ipeyinti
kubiza malini ukwazisa ikatana
uyigcina njani indoda eyi-sagittarius
I-borax iyafana nesoda yokuhlamba
ingakanani i-aspirin endinokuyinika inja yam
Ikrisimesi Imiboniso Yesilayidi